E-commerce Reviews Product: 7 Sababaha Sababta Dib u Eegista Internetka Ay Muhiim Ugu Tahay Noocaaga Martech Zone
E-commerce Reviews Product: 7 Sababaha Sababta Dib u Eegista Internetka ay muhiim ugu yihiin Noocaaga
Isniin, Janaayo 14, 2019 Khamiis, May 7, 2020 Juliette Anderson
Mid ayaa laga yaabaa inuu ogaaday sida ay ugu sii kordheyso ganacsiyada, gaar ahaan kuwa ku jira qaybta ganacsiga, si loogu daro dib u eegista boggooda internetka. Tani maahan xaalad fadlan, laakiin waa horumar caddeeyay inuu si aad ah waxtar ugu leeyahay kasbashada kalsoonida macaamiisha.
Waayo, ganacsiyada elektaroonigga ah, waa muhiim in lagu guuleysto kalsoonida macaamiisha, gaar ahaan kuwa markii ugu horeysay, maadaama aysan jirin wado ay ku arkaan alaabooyinka si dhab ah. Macaamiil badan ayaa aad uga labalabeeya inay wax ka iibsadaan dukaamada yaryar ee internetka maadaama ay u muuqdaan kuwo aan kalsooni badan ku qabin marka loo eego ciyaartoy waaweyn.
Mid ka mid ah qalabka ka caawinaya wax ka qabashada tani waa dib-u-eegis khadka tooska ah, kuwan soo socdaa ayaa ah qaar ka mid ah sababaha ugu wanaagsan ee ay tahay inaad ugu hirgeliso bartaada:
Waa maxay sababta dib u eegista internetka ay muhiim ugu yihiin astaantaada
Dib u eegista khadka tooska ahi waxay wadaan iibsiga - Sababta ugu horeysa ee ay muhiimka ugu tahay astaantaadu inay leedahay dib u eegista khadka tooska ahwaa inay saameyn ku yeelato dadka inay iibsadaan. Mar labaad, tan ayaa marka hore loo baahan yahay iibsadayaasha markii ugu horreysay maadaama aysan khibrad hore ugu lahayn ganacsigaaga. Maaddaama dib-u-eegista khadka tooska ah ay kobciso caddaynta bulshada, iyo maadaama dib u eegista khadka tooska ah ay ka yimaadaan macaamiisha kale, macaamiisha cusub waxay u badan tahay inay tixgeliyaan oo ay iibsadaan. Macaamiisha markii ugu horreysay waxay si aad ah ugu tiirsan yihiin jawaab celinta macaamiisha khibrada kuu leh, iyo haddii jawaab celinta ay tahay mid kalsooni ku filan leh, iibsadayaashaada markii ugu horreysay waxay u badan tahay inay dhameystiraan iibsigooda.
Faallooyinka tooska ah waxay kaa dhigayaan muuqaal badane - Dib-u-eegista khadka tooska ah waa nuxur ay iyadu iska leedahay. Mawduuca weli waa mid ka mid ah qodobbada ugu muhiimsan ee ku habboon hagaajinta mashiinka raadinta, sidaas darteed haysashada nuxur ahaan qaabka dib-u-eegista khadka tooska ah ayaa kaa caawin kara inaad sumaddaada ka sii muuqato Waxa weyn ee ku saabsan waa inay ka timaaddo macaamiishaada sidaa darteed uma baahnid inaad dadaal dheeraad ah ku bixiso aaggan. Waxaa laga yaabaa in caqabadda kaliya ee halkan ka jirtaa ay tahay in macaamiishaada lagu dhiirrigeliyo inay soo gudbiyaan ra'yigooda, isla markaana ay rajeynayaan inay bixiyaan kuwa wanaagsan.
Faallooyinka tooska ah waxay kaa dhigayaan kuwo lagu kalsoonaan karo -Horudhaca ahmiyadda ay leedahay dib u eegista khadka tooska ah ayaa ah inay kor u qaaddo kalsoonida sumaddaada. Waa wax aad u sax ah sida ay u adag tahay in lagu kasbado kalsoonida macaamiisha markii ugu horreysay, gaar ahaan haddii sumaddaadu aysan caan ahayn. Adoo haysta dib u eegis khadka tooska ah ah, waxaad ka shaqeyneysaa inaad ku horumariso kalsoonida astaantaada. Hubso inaad ku dadaasho inaad ugu yaraan kasbato ganacsigaaga guud ahaan, iyo sidoo kale ku darista sawirro wax soo saar oo tayo sare lehiyo bixinta maxaa yeelay daraasaduhu waxay muujiyeen sida qiimeyntu uga hooseyso afar xiddig ay si xun u saameyneyso ganacsiga iyo fursada sheyga ee ku guuleysiga kalsoonida macaamiisha mustaqbalka. Laakiin waligaa ha ilaalin qiimeyntaada - tani waa anshax xumo, waana inaadan waligaa qaadin wadadan.
Faallooyinka tooska ah waxay ballaariyaan sheekooyinka adiga kugu saabsan - Wax kale oo weyn oo ku saabsan dib u eegista khadka tooska ah ayaa ah inay ka caawineyso faafinta erayga sumaddaada. Faallooyinka wanaagsan ee ay sameeyeen macaamiisha, gaar ahaan marka lagu soo bandhigo bartaada, waxay ku dhiirrigelisaa macaamiishan inay kula wadaagaan shabakaddooda, taas oo u oggolaanaysa calaamaddaadu inay aado illaa inta qoraalladani socdaan. Marka ku dadaal inaad ku soo bandhigto jawaab celinta macaamiisha aad u fiican, oo aad ku celceliso inaad ka jawaab celiso jawaabahan sidoo kale. Waxay sidoo kale fiicnaan laheyd haddii dadaalkaaga inaad soo bandhigto jawaab celinta macaamiisha ay dhaafsiisan tahay bartaada. Ku samee guud ahaan kanaalkaaga suuqgeynta warbaahinta bulshada. Sidan oo kale, way ka raaxo badnaan lahayd macaamiishaadu inay tan la wadaagaan.
Dib-u-eegista khadka tooska ah ayaa si aad ah muhiim ugu ah go'aan gaarista - Fahamka muhiimadda ay leedahay dib-u-eegista khadka tooska ah, waxaad ku qasban tahay inaad ogaato inay tahay inay qayb ka noqoto istiraatiijiyadda suuqgeyntaada. Aad ayey uga muhimsan tahay sidii aad waligaa uxiirin lahayd marka aad ololeynayso ololayaashaada. Waa inaad ula dhaqantaa dib u eegista internetka sidii olole kaligiis ah, oo la imanaya xeelado kala duwan oo ujeedadoodu tahay inaad xoojiso awooddaada inaad kasbato jawaab celin togan, iyo inaad sare u qaaddo natiijooyinka. Halka ay suurta gal ka tahay, sidoo kale isku day inaad ku dhex biiriso ololayaashaada kale. Isku day inaad la timaado gimmicks aad u mashquuliya sida tartamada halkaasoo macaamiishaadu ay ku siin doonaan jawaab celinta ugu fiican ee alaabadaada. Waxaa waajib kugu ah inaad kasbato jawaab celin badan oo badan habkan.
Dib u eegista khadka tooska ah ayaa saameyn muuqata ku leh iibka - In kasta oo la sheegay in dib u eegista khadka tooska ah ay saameyn ku yeelanayaan wax iibsiga, oo sidaas awgeed iibku ay ku xiran yihiin inay si togan u saameeyaan, waxay ka badan tahay intaas kordhinta iibkaaga. Dib u eegista khadka tooska ah kuma guuleysto oo keliya iibsadayaasha markii ugu horreysay, laakiin sidoo kale waxay hagaajisaa daacadnimada astaanta, taasoo u oggolaanaysa macaamiishaadu inay sii wadaan inay ganacsi kula yeeshaan. Iyo ilaa iyo intaad sii wadid inaad bixiso alaab iyo adeegyo tayo leh, waxaad sii wadi doontaa inaad kasbato jawaab celin togan, wareegtaduna way socotaa. Waa muhiim inaad la jaan qaado dadaalkaaga tayada. Markaad sidan sameyso, waxaad hubtaa inaad si joogto ah kor ugu qaaddo iibintaada.
Faallooyinka tooska ah waxay ku siinayaan khad furan macaamiisha - Ugu dambeyntiina, dib u eegista khadka tooska ah waxay u adeegaan marin loogu talagalay la xiriirka macaamiishaada. Anshaxa casriga ahna wuxuu u baahan yahay ganacsatadu inay ka jawaabaan. Tani waa iyadoo aan loo eegin haddii jawaab celinta ay tahay mid togan ama taban. In kasta oo ay aad u faraxsan tahay oo ay fududahay in laga jawaabo jawaab-celinta togan, haddana waxaa lagaa doonayaa inaad ka jawaabto kuwa taban. Waa inaad tustaa macaamiishaada kale sida aad awoodi doonto inaad wax uga qabato wixii jawaab celin ah ee macaamiishaadu bixin karaan. Mar labaad, laguuma oggola inaad sheegto ra'yi-celinta ay meheraddaadu hesho. Maxay tahay inaad sameyso waa inaad iyaga ula macaamilaan si toos ah. Waa inaad caddeysaa inay meheraddaadu si adag u haysato xaaladda.
Ka shaqee dib u eegistaada internetka si aad kor ugu qaaddo sumaddaada
Sababta kore waxay si cad u sharraxeysaa sababta ay muhiimka ugu tahay ganacsigaaga inay adeegsadaan dib u eegista khadka tooska ah lagu sameeyo. Haddii aadan weli haysan, hubso inaad hadda bilowdo. Haddii aad horeyba u sameysay, hubi inaad ka sii shaqeyneyso xitaa si ka badan si aad u badiso faa'iidooyinka aad ka heli karto. Haysashada dib u eegista khadka tooska ah ee ganacsigaaga waa lagama maarmaan. Tani waa mid aan gorgortan geli karin sidaa darteed hubi inaad uga faa’iideysato sida ugu macquulsan.
Tags: macaamiishago'aan qaadashadae-commerceFaallooyinka internetka
Juliette Anderson waa Khabiir ku takhasusay bulshada oo loogu talagalay shirkad fulisa e-commerce oo ku takhasustay la shaqeynta iibiyeyaasha internetka kuwaas oo celcelis ahaan miisaankoodu yahay 5 + rodol ama ka weyn. Waxay gacan-qabasho kula shaqeysaa dukaamada elektaroonigga ah si loo gaaro iibka ugu wanaagsan ee afar sano horeyba loo qabtay. Takhasuskeedu wuxuu kujiraa suuqgeynta warbaahinta bulshada iyo dallacsiinta lacag bixinta ah.
Bini'aadanka iyo kuwa loo yaqaan 'Chatbots': Kumaa Maamuli doona Daryeelka Macaamiisha?
Qaab Casri ah oo Erey-shaqsiyeedka E-mayl loo Sharaxay